ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ / WOWOW Brushed Nickel ရေချိုးခန်း Faucet Centerset
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.915ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 35 ဖောက်သည် ratings
WOWOW ၏ရေချိုးခန်း Faucet Brushed Nickel သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ ခေတ်ပြိုင်စတိုင်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချိုးခန်း Faucet Brushed Nickel ကိုအခုဝယ်ပါ။
2321200 installation ကိုညွှန်ကြားချက်
SKU: 2321200 Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags:4လက်မ, brushed နီကယ်, သီးခြားကိုင်တွယ်
H ကို *** y က 2020-04-08
ငါလိုချင်သည့်နစ်မြုပ်အတိအကျ စတိုးဆိုင်အနည်းငယ်သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်အရာကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး၊ သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည်၊ ကလေးများနှင့်ကောင်းစွာထိတွေ့နိုင်ပြီးနောက်ထပ်မတောင်းဆိုနိုင်ပါ။
T က *** ဃ2020-04-10
ဒီဟာကမျှော်လင့်ထားတာထက်ငါတို့လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအများကြီးပါတဲ့လှပတဲ့ရေစုပ်စက်ပါ။ တစ်ခါတလေ faucet မပါတဲ့စုပ်စက်အောက်မှာ ၀ ယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စတိုးဆိုင်ကိုသွားစရာမလိုခဲ့ပါဘူး။ ငါတို့သည်လည်းဤပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအပေးအယူလုပ်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုလိုခံစားခဲ့ရတယ်။
ကို C *** y က2020-04-11
ငါဒါအတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေဒီဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လောက်လေးပြီးအရည်အသွေးကောင်းတယ်ဆိုတာအံ့သြမိပါတယ်။ သူတို့ကကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး၊ နာမည်ကြီးတံဆိပ်များရဲ့ကုန်ကျစရိတ်အနည်းငယ်အတွက်ပါ။
ဦး *** y က2020-04-11
ရေချိုးခန်းနှစ်ခု faucets နှစ်ခုကို un -stall လုပ်ဖို့ ၂ နာရီလောက်ကြာတယ်။ ဤသည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အား ၁၀ မိနစ်အတွင်းတပ်ဆင်နိုင်ရုံသာမကအနာဂတ်တွင်လိုအပ်လျှင် ၁၅ မိနစ်ထက်မပိုသောအချိန်တွင်၎င်းကိုတပ်ဆင်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါ faucets ဟောင်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းဒီဇိုင်းခဲ့ရသည်အဘယ်ကြောင့်ငါတကယ်တွေးမိခဲ့သည်။
R ကို *** ဌ2020-04-12
ငါဒီ faucet နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်လေးလံ။ ချောချောမွေ့မွေ့သောလက်ကိုင်များ၊ ကောင်းမွန်သောရေစီးဆင်းမှုနှင့်အရည်အသွေးပြည့် faucets များဖြစ်သည်။ ငါစာဖတ်သူကိုအထင်ကြီးလေးစားသည်မဟုတ်၊ ကျိန်းသေနောက်တဖန်ဒီအမှတ်တံဆိပ်ဝယ်ယူလိမ့်မယ်။
S က *** t ကို2020-04-19
အံ့သြစရာရေချိုးခန်းစုပ် faucet ။ တပ်ဆင်လွယ်ကူစေရန်အရာအားလုံးပါဝင်သည်။ ငါ၏အအသစ်များကို faucet ၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားခစျြ!
တစ်ဦးက *** ဎ2020-04-18
ဤသည် faucet ငါရေချိုးခန်းပြန်လည်ပြင်ဆင်စီစဉ်နေစဉ်ငါရှာဖွေနေအတိအကျအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သခင်၏ရေချိုးရန်အလွန်သဘောကျသောကြောင့်ငါထပ်မံဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကြော့မော့ခြင်းနှင့်စတိုင်။ Plus အားစျေးနှုန်းမှန်သည်။ ငါ၏အမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်
M က *** ဌ2020-05-06
အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်၊ ကြည့်ကောင်းသည်၊ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထုပ်ပိုး, ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်ကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ မင်းရဲ့လက်တွေကိုအလွယ်တကူရနိုင်အောင်အဆင့်မြင့် faucet ကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ ခိုင်ခံ့စွာတည်ဆောက်ထားသောအလွန်ကောင်းသော finish ကို။
B က *** s ကို2020-05-10
အလွန်ကောင်းသော faucet နှင့်အတူက xame သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ကျစ်လစ်သည့်ထောက်ပံ့ရေးပိုက်များသည်ရှည်လျားပြီး (၂၀″ အပေါင်း) နှင့်အလွန်လေးလံသောတာဝန်ရှိသည်။
N ကို *** s ကို2020-05-12
ဒီဝယ်ယူမှုကိုကျွန်တော်အရမ်း ၀ မ်းသာမိပါတယ်။ ထိပ်ဆုံးတွင်အစိုင်အခဲအရည်အသွေးရှိသည့် flex လိုင်းများကိုလည်းသင်တွေ့ရသည်။ သို့သော်စောင့်ပါ! ဒါကမလွယ်ပါဘူး၊ သင်လည်းထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးလည်းလှပသောအမျိုးအစားတစ်ခုပါသော pop-up အဆို့ရှင်ကိုလည်းသင်ရရှိသည်။ နောင်တမရဘူး။
: D *** င2020-05-13
ကျနော်တို့ဒီ faucet ကိုချစ်၏။ ဒါဟာရေနုတ်မြောင်းများအတွက်ယိုစီးမှုနှင့် fittings နှင့်အတူပြည့်စုံလာ၏။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံမှာယူမယ်
င *** မီတာ2020-05-19
၎င်းသည်လှပပြီးလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူပါလာသည်။ ထည့်သွင်းရန်မိနစ်အနည်းငယ်မျှယူပြီးကြည့်ကောင်းပြီးအလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဝယ်မယ်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လက်ရှိအိမ်သာ faucet spout သည်ကောင်တာနှင့်နီးကပ်ရန်နှင့်ရေထဲမှစုပ်ယူထားသောရေသည်။ ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ camper မှလာသည့်အရာထက်များစွာသာလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်လိမ့်မည်။ ဒီဝယ်ယူမှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်။
M က *** ဎ2020-05-22
လှပပြီးကြီးမြတ်တဲ့စျေးနှုန်း။ ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်။ တွန်းအားပေးအဆို့ရှင်ကိုချစ်။ သတိတောင်မရလိုက်ဘူး။
S က *** ဎ2020-05-29
ဤသည် faucet ငါ့အနီးရှိမည်သည့်စတိုးဆိုင်ထက်ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်အများကြီးပိုကောင်းစျေးနှုန်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးကြည့်ကောင်းသည်။
H ကို *** တစ်ဦး2020-06-02
: D *** င2020-06-02
ကို C *** ဃ2020-06-02
လွန်ခဲ့သောနှစ်လ၏ ၂ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
သူတို့ကကြောက်စရာကောင်းတယ် သူတို့ဟာအလွန်စတိုင်ကျပြီးစိတ်ကူးကောင်းတဲ့ !!
ဒီရေစုပ်ဆေးအစုံသုံးစုံကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ ငါနှစ်ကြိမ်လောက်သုံးစွဲခဲ့ပေမယ့်ငါ့အဘတ်ဂျက်အတွက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဤသူတို့သည်အလွန်ကောင်းတဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကြီးမြတ်ကြည့်ရှုပါ။ ငါ၌ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေပိုက်သမားတပ်ဆင်ထားသူသူသူတို့မြင်ဘူးသောအ nicest အစုံတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
K သည် *** r2020-06-13
ကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းများကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူတို့ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာငါသဘောကျတယ်
S က *** ဎ2020-06-17
ငါဝယ်ယူလိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးရေချိုးခန်း faucet! Fantastic စျေးနှုန်း၊ အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သောစတိုင်ကျလှပသောကြည့်ကောင်းမှု၊
အလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်။ လိုအပ်လျှင်အခြားတစ်ခုနောက်မှကျိန်းသေအခြားဝယ်ခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်ကြည့် install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
M က *** y က2020-06-20
အောက်ထပ်ရေချိုးခန်းအဘို့ကြီးသောအစားထိုး faucet ။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ပြီးဆုတ်ယုတ်မှုမရှိသောအလုပ်လုပ်သည်။ လာမယ့်အပေါ်ထပ်ရေချိုးအလားတူဝယ်ယူရန်ရှာဖွေနေ။
တစ်ဦးက *** r2020-06-25
ကျွန်တော့်အိမ်သာအရသာအစားထိုးစရာဘာမှမဝယ်ရတော့ဘူး။ ကြည့်ကောင်းတယ်။ ကောင်းသောတန်ဖိုး။
တစ်ဦးက *** တစ်ဦး2020-06-28
အရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးကိုဤအရာနှင့်အတူ # 1 ဖြစ်ကြသည်။ စူပါလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ပြီးသင်တပ်ဆင်ရန်သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးသည်သေတ္တာထဲတွင်ရှိသည်။ ဘယ်နေရာမှာမှမနိုင်နိုင်ဘူး
တစ်ဦးက *** ဎ2020-06-30
ငါတို့သုံးယောက်လုံးကိုရေချိုးခန်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ဝယ်လိုက်တယ်။ ငါယိုစီးအဆို့ကိုချစ်။ ၎င်းသည်ခလုတ်တစ်ခုနှင့်တခုခုကိုပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုပိုမိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ ယေဘုယျအားချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်စွယ်စုံဒီဇိုင်း။
M က *** y က2020-07-01
မိနစ် ၃၀ အတွင်းထည့်သွင်းထားသည်။ အဟောင်းထဲကနေအဆင့်မြှင့်ကြောင့်ငါတို့ရေချိုးခန်းကိုပိုမိုခေတ်မီစေရန်ကောင်းတဲ့အတွေးဖြစ်ခဲ့သည်
S က *** ဌ2020-07-05
အဆိုပါပုံစံနှင့် brushed နီကယ် finish ကိုချစ်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ငါ့မှာရေချိုးခန်းသုံးခန်းရှိတယ်။
၎င်းကိုဝယ်ယူပြီးမကြာခဏအသုံးပြုသောမြေအောက်ခန်းရေချိုးခန်း၌ faucet အဟောင်းကိုအစားထိုးရန်။ ငါအလုပ်အတွက်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူလာ၏။ ငါဒီ faucet ၏အရည်အသွေးနှင့်အတူသဘောကျမိပါတယ်။
D *** ဎ2020-07-12
အလွန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်! ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အခြားရေချိုးခန်းအတွက်နောက်တစ်ထပ်ဝယ်မည်
S က *** ဃ2020-07-13
ငါမာစတာရေချိုးခန်းရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲကြောင့်လေပြေဖြစ်ခဲ့သည်။ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးသူတို့ကတကယ့်ကိုကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်းအခြားရေချိုးခန်းများကိုလည်းငါပြောင်းလဲမည်။
ကို C *** y က2020-07-13
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူ၊ ခေတ်သစ်နှင့်စျေးသိပ်မကြီးသော။ ကျွန်တော့်ရဲ့ရေချိုးခန်းတစ်ဝက်ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းပါတယ်
L ကို *** ဃ2020-07-16
အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားပြီးတန်ဖိုးကြီးသည်။ သငျသညျ faucet အသစ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်ကြည့်လိုလျှင်ငါဒီငွေကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးငါအကြံပြုလိမ့်မယ်
W *** ဇ2020-07-20
ကျွန်မတို့ရဲ့ရေချိုးခန်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရေပိုက်တစ်လုံးလိုတယ်။ ဒေသခံစတိုးဆိုင်တွေမှာငါတို့ကြိုက်တာမရှိဘူး။ ဒီ faucet ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်တယ်! တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအဆင့်မြင့်ကြည့်ရှုရန်
J ကို *** င2020-07-24
ငါဒီ faucets တ ဦး ဝယ်ယူအလွန်နှစ်သက်ငါငါ့အအခြားရေချိုးခန်းများအတွက်နောက်ထပ်နှစ်ခုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာစျေးနှုန်းသင့်တင့်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ရေချိုးခန်းနစ်မြုပ်မှုကိုသန့်ရှင်းစေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်လျင်မြန်စွာနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုံသဏ္inာန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အံ့သြဖွယ် faucet ငါဒီ faucet အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
စျေးကမှန်ပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ငါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘယ်လိုကြည့်ရတာကောင်းလဲငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ တကယ် faucet ကောင်းတယ် တော်တော်လေးရိုးရှင်း install လုပ်ပါ